အင်္ဂလိပ်စာရေးနည်းအဖြာဖြာ အပိုင်း-၆ (Business email & Academic email/ American style) - Myanmar Network
အင်္ဂလိပ်စာရေးနည်းအဖြာဖြာ အပိုင်း-၆ (Business email & Academic email/ American style)
Posted by AungKoU (UMK) on January 7, 2013 at 21:48 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
အမေရိကန်စတိုင်(လ်) Business email နှင့် Academic email ရေးသားရာတွင် သုံးနှုန်းရမည့် ယဉ်ကျေးမှု အဆင့်အတန်း များသည် ယခင် တင်ပြခဲ့သော ပုံစံများနှင့် အတူတူပင် ဖြစ်သော်လည်း ဘာသာစကား အသုံးအနှုန်းများသာ အနည်းငယ် ကွာခြားသွားပါသည်။ American style နှင့် British style အဓိက ကွာခြားသည်မှာ British email တွင် တစ်ခါတစ်ရံ formal ဆန်တတ်သော်လည်း American style email သည် အလွန် formal မဆန်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဥပမာ အားဖြင့် British (formal) တွင် “I would be grateful if you could send your payment to …. /A list of fees can be found on our website. /Please don’t hesitate to contact me …. ” စသည်ဖြင့် formal ဆန်ဆန် သုံးနှုန်းသည်ကို တွေ့ရပြီး American တွင် “Please send your payment to …./You can findalist of fees on our website. /Please feel free to contact me ” စသည်ဖြင့် ရေးသားကြသည်ကို တွေ့ရသည်။
အမေရိကန်စတိုင်(လ်) Business email နှင့် Academic email နှစ်စောင်ကို နမူနာ အဖြစ် ဖော်ပြကာ ရှင်းလင်း တင်ပြသွားပါမည်။
To : kmiller@charitytrainers.org
From : risai@newgreenspaces.jp
Subject: Request for customized training
Dear Ms. Millers,
I am writing to ask about the possibility of organizingacustomized training program foragroup of five of our mid-level managers. We would be interested in having them learn more about staff recruitment, project management, and fundraising practices in the American charity and nonprofit sector. Could you please let me know what scheduling and pricing options are available foraweek-long course fulfilling these requirements ?
New Green Spaces, Japan
ရက်စွဲတပ် ရာတွင် British style (19/8/2012) သည် dd/mm/yy ဖြစ်ပြီး American style တွင် mm/dd/yy ပုံစံဖြင့် ရေးသားသည်ကို သတိပြုရမည်၊ အမည်ကို ရေးသားသောအခါ Mr ဟုရေးပြီးလျှင် full stop (.) အသုံးပြုသည်ကိုလည်း သတိထားရပါမည်။ (Dear Ms. Millers) စာကိုယ်တွင် အသုံးပြုသော စကားလုံးများအတွက် စာလုံးပေါင်း (spelling) များကို အမေရိကန် စာလုံးပေါင်း US spelling ဖြင့်သာ အသုံးပြုရပါမည်။ (ဥပမာ - customize, flavor, center, etc) တိုက်ရိုက်အသုံး “you” ကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ email ၏ အဆုံးသတ်တွင် Sincerely yours (သို့မဟုတ်)Sincerely ဟု ရေးသားကာ နိဂုံးချုပ်နိုင်ပါသည်။ Academic email ကို နမူနာဖြင့် ဆက်လက် ဖော်ပြပါမည်။
To : jacobi@bussch.clemson.edu
From : rwagner@stud.clemson.edu
Subject: Proposed meeting this wee
Dear Dr. Jacobi,
I am planning to submit the attached paper to ‘ Markets in Focus ’ next week. I wonder if it mighty be possible for us to meet to discuss it before I send it off? I’d be very grateful for your comments and advice. I’m available every day after3p.m., or in the mornings on either Tuesday or Thursday.
Academic email ရေးသားရာတွင် Subject တွင် တိုတိုနှင့် လိုရင်းကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ရေးသားပါ၊ ထပ်တွဲထည့်ပေးမည့် Attachments များကို အမည်နှင့် တကွ ဖော်ပြပေးရမည် ဖြစ်ပြီး ဖြစ်နိုင်လျှင် ဖိုင်အရွယ်အစား (file size) ကို 2MB ထက် မကျော်သင့်သည်ကို လည်းသတိထားရပါမည်။ အထက်တွင် ဖော်ပြခဲ့သည့် အတိုင်း အမည်ကို ရေးသားပြီးလျှင် full stop (.) ကို အသုံးပြုရပါမည်။ email ကို ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေး လေးလေးစားစား အဆုံးသတ် ရပါမည်။
နေ့စဉ်နှင့် အမျှ လုပ်ငန်းခွင်တွင် email ဖြင့်ဆက်သွယ် နေကြသူများ အတွက် တစ်ထောင့် တစ်နေရာမှ အထောက်အကူ ပေးနိုင်ရန် ရည်ရွယ်လျှက် ရေးသားတင်ပြလိုက်ပါသည်။
Permalink Reply by aungnaingthu on January 10, 2013 at 10:24